खुसिको खबर ! भारतमा तहल्का पिटेकी सावित्रा भण्डारीले अब युरोपियन लिग खेल्ने ( भिडियो हेर्नुस ) – Nepal Insider
निर्मला पन्तको छोरी भागरथी पन्त (सुन्दरी) बचाउ अभियान सके सहयोग नसके सेयर गरौ !
सर्वोच्चको आदेश: सवारीसाधन जोरबिजोर प’द्धतिमा चलाउनु
अमेरिकामा भएको सवारी दु’र्घटनामा परि एक नेपालीको ज्यान गयो
सुन्दै डरलाग्दो घटना झापामा घट्यो, घटनास्थल पुग्दा सबैको होस उड्यो (भिडियो सहित)
एकाबिहानै दुर्घटनाको खबर : ५ जनाको मृत्यु १९ जना घाइते
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/खुसिको खबर ! भारतमा तहल्का पिटेकी सावित्रा भण्डारीले अब युरोपियन लिग खेल्ने ( भिडियो हेर्नुस )
खुसिको खबर ! भारतमा तहल्का पिटेकी सावित्रा भण्डारीले अब युरोपियन लिग खेल्ने ( भिडियो हेर्नुस )
7132minutes read
काठमाडौं। सावित्रा भण्डारी नेपाली महिला फुटबलको परिचित नाम हो । राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’नामले पनि परिचित छिन् । सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडीको कीर्तिमान बनाएकी सावित्राले फुटबलमा छोटो समयमै लोभलाग्दो सफलता हात पारेकी छिन् ।
भर्खरै सम्पन्न भारतको ‘हिरो महिला लिग फुटबल’मा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उनी सर्वाधिक गोलकर्ता बनिन् । उनले आफू आबद्ध टीम गोकुलम केरेलालाई च्याम्पियन बनाउन कुल १६ गोल गरिन् । सावित्राको यस किसिमको सफलताको पछाडिको राज के हो त ?
यो सफलता पछाडिको संघर्ष र उनको फुटबल करियर कसरी अगाडि बढिरहेको छ त ? भन्ने विषयमा न्यूज २४ टेलिभिजनले आफ्नो नियमित प्रस्तुति ‘६ प्रश्न’माउनै सावित्रा भण्डारीसंग विशेष कुराकानी गरेको छ । भर्खरै मात्र भारतबाट नेपालीआइपुगेकी स्ट्राइकर साबित्राले टिभी जर्नलिष्ट बीरेन्द्र जैरुसंगको कुराकानीमा समग्रमा लिग आफ्नो लागि धेरै राम्रो भएको बताउँदै भनिन्, ‘गत सिजनमा पनि मैले जिकेएफसीबाट खेलेकी थिए ।
जसलाई मैले च्याम्पियन बनाएकी थिए । २०१९ लाई नै मैले निरन्तरता दिदै २०२० मा पनि गोकुलम केरेलालाई च्याम्पियन बनाउन सफल बने । स्ट्राइकरको रुपमा मैले हाइस्कोररको रुपमा सपना बनाएकी थिए, जुनचाँहि मैले साकार पारे । जे होस् खुसी छु ।’
उनले थपिन्, ‘व्यक्तिगत परफरमेन्सको बारेमा भन्नुपर्दा मैले स्टार्टिङ फेजमा मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो । टिमसँग घुलमिल हुन पाएकी थिइन । मैले एकैचोटी टुर्नामेन्ट खेले । मैले त्यहाँ ट्रेनिङ पनि गर्न पाइन । त्यहाँको टीमसंगै बसेर ट्रेनिङ गर्न पाएकी भए केहि हदसम्म बुझ्थे होला । तर, मलाई टीम कक्बिनेशन बुझ्नका लागि एक÷दुई म्याच धेरै कठिन भयो ।’
आफूले टीमसंग एक÷दुई म्याच खेलिसकेपछि मात्रै टिम फर्ममा आएको बताइन् । गतवर्ष जस्तै यो वर्ष पनि गोकुलम केरेलालाई सफल बनाउन सफल भएकी हुनाले त्यहाँ पनि धेरै दर्शकहरु कमाएकी उनको तर्क छ । उनले भनिन्, ‘गोकुलम केरेलाएफसीका मेम्बरहरुले अझैं पनि उत्तिकै माया गर्नु हुन्छ ।’ कुराकानीको क्रममा सावित्राले आफ्नो लक्ष्य यूरोपको मैदान भएको पनि बताइन् ।विस्तृत कुराकानी भिडियोमा
गोर्खा ब्वाइज स्पोर्टिङ क्लब बुटवललाई २–१ ले पराजित गर्दै सानमिगेल मच्छिन्द्र क्लब झापाको सताक्षीधाममा जारी तेस्रो सताक्षी गोल्डकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मछिन्द्रले अन्तिम चारमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। अब उसले फाइनल प्रवेशका लागि त्रिभुवन आर्मीको सामना गर्नेछ। सतासीधाम स्पोर्टिङ क्लबको आयोजनामा भएको खेलमा ए डिभिजन लिग विजेता मच्छिन्द्रले गोल्डकपमा सुखद सुरुआत गरेको हो।
खेलमा सुरुवाती अग्रता गोर्खा ब्वाइजले लिए पनि जित निकाल्न भने सकेन। खेलको १६औँ मिनेटमा गोर्खा ब्वाइजका काजिमले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए। उनले ओलाकेजीको पासलाई गोलमा परिणत गरेका थिए। मच्छिन्द्रले खेलको २५औँ मिनेटमा खेललाई बराबरीमा फर्कायो। रञ्जित धिमालले गरेको कर्नर प्रहारलाई विदेशी खेलाडी आन्द्रेस निअले गोलमा परिणत गरिदिए। त्यस्तै, खेलको ३३औँ मिनेटमा मच्छिन्द्रले अग्रता दोब्बर बनायो। सरोज योन्जनको हातमा बलले छुँदा पाएको पेनाल्टीलाई मच्छिन्द्रका विमल घर्तीमगरले गोलमा परिणत गरे। खेलमा दुवै टिमले गरेका केही उत्कृष्ट प्रहार खेर गएका थिए।
पहिलो हाफको सुरुवाती सयममा मच्छिन्द्रका विशाल राई ‘ए’ ले गरेको प्रहार फितलो हुँदा गोलमा परिणत हुन सकेन। खेलको २१औँ मिनेटमा मच्छिन्द्रका विराज महर्जनको प्रहार गोलकिपर सोजित गुरुङले सहजै बचाएका थिए। २४औँ मिनेटमा गोर्खा ब्वाइजका ओलाकेजीको प्रहार बारनजिकैबाट बाहिरिएको थियो भने ३९औँ मिनेटमा काजिमको प्रहार फितला रह्यो। ७६औँ मिनेटमा गोर्खा ब्वाइजको प्रहारलाई मच्छिन्द्रका विदेशी खेलाडी एडेलाजिया सोमिडेले हेडमार्फत उत्कृष्ट बचाउ गरे। बुधबारको खेलमा मछिन्द्रका विमल घर्तीमगर म्यान अफ दी म्याच घोषित भए। उनले नगद १० हजार प्राप्त गरे।
प्रतियोगिताअन्तर्गत बिहीबारबाट सेमिफाइनलका खेलहरु हुनेछ। सेमिफाइनलको पहिलो खेल आयोजक सतासीधाम स्पोर्टिङ क्लब झापा र थ्री स्टार क्लबबीच हुनेछ। क्वार्टर फाइनलमा आयोजकले मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई पराजित गरेको हो भने थ्री स्टारले बेलबारी फुटबल क्लब मोरङलाई पराजित गरेको थियो।
विदेशमा युवतीलाई यस्तो सम्म गर्दा रहेछन्, जोर्डनमा बेचिएकी चेली भागेर रातारात फर्किएपछि विमानस्थलमै रुदै सुनाईन पि’डा (भिडियो हेर्नुस्)
हरेक बाबुको सम्मान गर्ने सन्तानले हेर्नैपर्ने भिडियो
लकडाउनमा काठमाडौंमा यस्तो अचम्मको घर -जहाँ श्रीमान गुमाएकी महिलाले हजारौं खान नपाएकालाई सित्तैमा खाना बाँड्छिन् (भिडियो हेर्नुस)
भर्खरै सरकारले ल्यायो नसोचेको नियम ! भारतबाट १ लाख मान्छे भित्रँदै, नेपालको भयावह अवस्था..
५० वर्षका जग्गा दलालले दुई छोरी सहित २४ वर्षकी श्रीमती उडाए, विदेशमा कमाएको ७ लाख पनि छैन भन्दै रोए श्रीमान (भिडियो हेर्नुस्)